Valeria - Jereo eo alohan'io - Fanisana ny fanjakana
'Lady Mary's, ilay Vehivavy "Eny" mankany	Valeria Copponi	amin'ny 7 Oktobra 2020:
Anio, andao isika hihira fiderana an'Andriamanitra satria nanao zavatra lehibe tamin'ny zanany rehetra Izy. Ankizy kely, amin'ny maha-ankizivavy nanetry tena ahy, dia novaliako tamin'ny “Eny” aho. Nampiasa ny kely indrindra tamin'ny zavaboariny Izy hitondrany ny Zanany malalany indrindra aminao. Jesosy Kristy Tomponao no nitia ahy satria Izy irery ihany no mahalala ny fomba: amin-kitsimpo, tanteraka, amin'ny fitiavana izay tsy ho ferana mandrakizay. Izy dia afaka nanolotra ny fiainany tanora ho anao rehetra. Niara-nijaly taminy aho noho io sorona io, fa toa azy kosa dia mbola manolotra ny tenako amin'ny Ray ho anao tsirairay avy aho. Ny fitiavana ny reny tsy azo refesina, vonona foana hanome ny ainy.
Anaka, araho ny ohatra nataoko: manana Ray ianareo izay nanome fiainana noho ny fitiavany lehibe — fa mikatsaka ny hahazo fiainana mandrakizay. Tsy inona izany zavatra iainanao izany raha oharina amin'izany ny mandrakizay. (1) Anaka, tiako ho any amiko daholo ianareo; izany no hankanesako any aminao. Amin'ny fanatrehako eo aminareo dia te hamporisika anao aho, indrindra amin'izao fotoan-tsarotra iainanao izao. Mijere mialoha: aza matahotra, satria tsy misy olona afaka manaisotra ny fiainana mandrakizay aminao. Atolory ny sorona ataonao mba hahafahan'ny zanako lavitra indrindra manakaiky ny fitiavan'Andriamanitra. Mangataka anao aho hitia tahaka ny itiavako anao; mandresy lahatra ireo izay lavitra indrindra amin'ny Ray Mandrakizay amin'ny ohatra tsara navelanao. Tonga eto aho ary mitso-drano anao amin'ny andro (2) natokanao ho ahy; Tiako ianao, anaka, ary tsy ho reraka aho mampahery anao amin'ny fotoan-tsarotra iainanao.
Romana 8:18: “Heveriko fa ny fijaliana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy misy dikany raha oharina amin'ny voninahitra haseho ho antsika.”[↩]
Ny faha-7 oktobra dia fahatsiarovana ny vadin'ny Rôzery. Fanamarihan'ny mpandika teny.[↩]
← Pedro - Na inona na inona mitranga
Gisella - Navoaka ny devoly →